Friday February 28, 2020 - 14:17:48 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Federaalka iyo Ahlusuna uu ka socdo bartamaha magaalada, kaasoo la isu adeegsanayo hub culus.
Sida wararku sheegayaan dagaalka maanta ayaa ka xooggan kii xalay ka dhacay magaalada oo ahaa mid kooban ,Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalka labada dhinac uu yahay mid ay isu adeegsanayaan madaafiicda hoobiyeyaasha ah.
Dagaalka oo markii hore ka bilowday xarunta Inji iyo nawaaxiga Madaxtooyada Galmudug ayaa la soo sheegayaa inuu haatan saameeyey inta badan magaalada Dhuusamareeb oo jahwareer weyn uu ka jiro.
Waxaa gebi ahaanba joogsaday isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee magaalada, iyadoo laga kala cararay goobaha ganacsiga iyo suuqyada magaalada.
Dhowr hoobiye ayaa la xaqiijiyey iney ku dhaceen dhabarka dambe Hotelka caanka ah ee Midnimo welina lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan oo weli socda, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in meydad iyo dad dhaawacyo qaba la geeyey isbitaalka magaalada.
Labada ciidan ee dagaalamaya ayaa goobaha ay difaaca uga jiraan ka ridaya rasaas culus iyo qoryaha B10 iyo qoriga RBG, waxaana dadka deegaanka ay goor hore oo xalay bilaabeen inay ka barakacaan.
Ahlusuna iyo maamulka Galmudug ee uu hoggaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu dagaalka ku soo qaaday.
Labada Madaxweyne ee magaalada ku wada sugan ee kala ah Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor oo ay aqoonsan yihiin dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka iyo Madaxweynaha kale ee taageerayaashiisa doorteen ee Ahlusuba Sheekh Maxamed Shaakir ayaa la sheegayaa inay xarumahooda kubsugan yihiin.
Shacab fara badan ayaa xalay illaa saaka kaa barakacay magaalada, halka qaar kale ay ku go’doonsan yihiin xaafadooda markii ay awoodi waayeen iney ka baxaan guryahooda dagaalka hareerahooda ka socda awgeed Mana jiro illaa hadda war ku saabsan dagaalkan oo ka soo baxay Ahlusuna Galmudug iyo Dowladda Federaalka.
Howlihii Ka Socday Xarunta Xalane oo Hakad La Galiyay iyo AMISOM oo Ka Hadashay.
29/03/2020 - 14:30:38